महाभारत खण्ड १९ - विकिपुस्तक
महाभारत खण्ड १९
१ शान्ति दूत श्रीकृष्ण , युद्ध शुरुवात तथा श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनलाई उपदेश
२ पहिलो दिनको युद्ध
२.१ अभिमन्यु र पितामहबिचको युद्ध
२.२ उत्तरको बीरगति
२.३ श्वेतको बीरगति
३ दोश्रो दिनको युद्ध
३.१ दुर्योधनको सम्बोधन
३.२ भीष्म र अर्जुनको भिडन्त
३.३ द्रोण र दृष्टद्युम्नको बिचको युद्ध
३.४ भीमको पराक्रम
३.५ दोश्रो दिनको विश्लेषण
४ भीष्म द्रोण वध
६ बाहिरी कडिहरु
शान्ति दूत श्रीकृष्ण , युद्ध शुरुवात तथा श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनलाई उपदेश[सम्पादन]
श्रीकृष्ण को अर्जुन को विराट रुप प्रदर्शन
धर्मराज युधिष्ठिर आठ अक्षौहिणी सेनाको स्वामी भएर कौरवसंग युद्ध गर्न लाई तैयार भए। पहिले भगवान् श्रीकृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन को नजिकै दूत बनएर गये। उनले एघार अक्षौहिणी सेना को स्वामी राजा दुर्योधन देखि भने -
'राजन्! तिमी युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दुइ या उनलाई पाँच नै गाँव अर्पित गरेर दो; हैन त उनसंग युद्ध करो।'
श्रीकृष्ण को कुरा सुनेर दुर्योधन ले कहा- 'म उनलाई सुई को चुच्चो को बराबर भूमि पनि हैन दूँगा; हाँ, उन लेयुद्ध अवश्य करूँगा।'
ऐसा भन्एर त्यो भगवान् श्रीकृष्ण को बंदी बनाउन को लागि उद्यत भयो। उन समय राजसभा मा भगवान् श्रीकृष्ण ले आफ्नो परम दुर्धर्ष विश्वरूप को दर्शन गराएर दुर्योधन को भयभीत गर्यो। फेरि विदुर ले आफ्नो घर ले गएर भगवान् को पूजन र सत्कार गर्यो।
तदनन्तर उनि युधिष्ठिर को नजिकै लौट गये र बोले-'महाराज! तपाईं दुर्योधन संग युद्ध कीजिये'
युधिष्ठिर र दुर्योधन को सेनाहरु कुरुक्षेत्र को मैदान मा जा डटीं। आफ्नो विपक्ष मा पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनहरुलाई देखेर अर्जुन युद्ध ले विरत हो गये, तब भगवान् श्रीकृष्ण ले उन लेकहा-"पार्थ! भीष्म आदि गुरुजन शोक को योग्य छैनन्। मनुष्य को शरीर विनाशशील छ, तर आत्मा को कहिल्यै नाश हैन होता। यो आत्मा नै परब्रह्म छ।
'म ब्रह्म हूँ'- यस प्रकार तिमी उन आत्मा को समझो। कार्य को सिद्धि र असिद्धि मा समानभाव देखि रहएर कर्मयोग को आश्रय ले क्षात्रधर्म को पालन करो।"
श्रीकृष्ण को यस्तो भन्ए पछि अर्जुन रथारूढ हो युद्ध मा प्रवृत्त भए। उनले शंखध्वनि गर्यो। दुर्योधन को सेना मा सबै भन्दा पहिले पितामह भीष्म सेनापति भए। पाण्डवों को सेनापति शिखण्डी थिए। यिनी दुवै मा भारी युद्ध छिड गया। भीष्मसहित कौरव पक्ष को योद्धा उन युद्ध मा पाण्डव-पक्ष को सैनिकहरु मा प्रहार गर्न लगे र शिखण्डी आदि पाण्डव- पक्ष को वीर कौरव-सैनिकहरु को आफ्नो बाणहरुको निशाना बनाउन लगे।
पहिलो दिनको युद्ध[सम्पादन]
दुशासनले कौरब सेना र भीमसेनले पाण्डव सेना हाँकेका थिए । युद्धको कोलाहल गुञ्जियो । आकाश थर्कियो । ढोलहरु, सिँगहरु, शंखहरु र बिकुलहरु खलबल हुने गरी बज्यो । कोलाहलले कान खायो । घोडाहरुले चित्कार गरे । उन्मत्त हाथीहरुले तीखो स्वर गरी बिकुल बजाए । लडाकुहरुले सिंहनाद गरेर आवाज निकाले । बाणहरु उज्वल उल्काहरु जस्तै आकाशबाट बर्सिन थाले । बाबु, छोरा, काका भतिजाहरुले पहिलेको प्रेम र सम्बन्धहरु बिर्सेर आफुमा आफुमा काटमार गर्न थाले । प्रचण्ड हत्या काण्ड भए ।
पहिलो दिनको मध्यान्ह कालमा पाण्डवसेनाहरु नराम्रो सित शिथिल बएका थिए । भीष्मको रथ जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ त्यहाँ संहारको नृत्य जस्तै बञो ।
अभिमन्यु र पितामहबिचको युद्ध[सम्पादन]
अभिमन्युले सो सहन सकेन र उनले पितामहलाई आक्रमण गरे । सबभन्दा जेठा र सबै भन्दा कान्छापितामहबिच युद्ध भएको बेला त्यस द्वन्द युद्ध हेर्न देवताहरु पनि आएका थिए । अभिमन्युको रथमा सुबर्णको कर्णिकार रुख देखिने ध्वजा उज्वल भएर फरफराएको थियो । उनको एउटा बाण कृतबर्मालाई लाग्यो, शल्यलाई पाँच चोटी र भीष्मलाई नै नौ चोटी लागेको थियो । तरबारको धार जस्तो भएको अभिमन्युको बाणहरु मध्य एउटा बाणले दुरमुखको सारथीलाई लाग्यो, उनको छेदन भएको टाउको जमिनमा गुट मुटिएको थियो । अर्को बाणले कृपको बाणलाई भाँचि दियो । तमाशा हेर्न आएका देबताहरुले अभिमन्युको पराक्रममा फूल बर्साएका थिए । भीष्म र अन्य बीरहरुले अभिमन्युको प्रशंसा गर्दै ठूलो स्वरले भन्यो –" साँचै नै धनन्जयको सुयोग्य पुत्र भएको रहेछ" ।
तद अन्तर कौरब सेनाहरुले त्यस वीर नवयुबक माथि संयुक्त आक्रमण गरे, तर उनिहरु सबैको अगाडि उनी अडिक भएर बसेका थिए । भीष्मले प्रहार गरेका सबै बाणहरुलाई अभिमन्युले काटेका थिए । उनले ताकेर हानेको एउटा बाणले ताडिको रुख भएको भीष्मको ध्वजालाई पतन गरिदिए । त्यो देखेर भीमले अति हर्ष गरेर वीर भतिजालाई आर्को प्रोत्साहन दिनको लागि सिँहनाद गरेका थिए ।
वीर बालकको बहादुरी देखेर पितामहलाई ठूलो हर्ष भयो । इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि त्यस बालक माथि पूर्ण बल लगाएर भीष्मले आक्रमण गर्नु परेको थियो । त्यस नव युबक वीर अभिमन्युलाई भरोसा दिन बिराट, उनका छोरा उत्तर, द्रुपदका छोरा दृष्टद्युम्न र भीम आए । सबै मिलेर पितामहलाई आक्रमण गरे र भीष्मको ध्यान अभिमन्युबाट हटाए ।
बिराटको छोरा उत्तरले हाथीमा आरोहण गरेर शल्य माथि भयानक आक्रमण गरे । शल्यका रथका घोडाहरु मरे । त्यसो भए पछि शल्यले उत्तरलाई गदाले प्रहार गरे । गदा उत्तरको छातिमा नै लाग्यो । उत्तरको गदा हातबाट खस्यो र उनि लडेर म-यो । तर हाथी हटेर गएन । त्यस्ले हमला गर्दै रह्यो । तर शल्यले त्यसको सूँढ काटी शरीरको धेरै ठाउँहरुमा बाणहरुले प्रहार गरे । अनी त्यो हाथी ठूलो स्वरले करायो र म-यो । शल्यले कृतबर्माको रथ चढेका थिए ।
बिराटको जेठो छोरा श्वेतले आफ्नो भाइ उत्तर मरेको देखे । घ्यु होमेको आगो जस्तै उनको क्रोध उठ्यो । उनले शल्य तिर रथ बढायो । तुरुन्तै शल्यको सहायता गर्न रथ चढी सात जना बीरहरु आइपुगे । चारै तिर बाट उनिहरुले शैल्यको रक्षा गरेका थिए । श्वेत उपर उनिहरुले बाणहरु ओहि-याय । शस्त्रहरु बादलमा बिजुलि चम्के जस्तै चम्केका थिए । अपूर्ब सित श्वेतले आफ्नो रक्षा गरेका थिए । श्वेतले शत्रुका सबै बाणहरु बिचैमा रोकिदिएका थिए । उनि माथि प्रहार गरेका गदाहरु पनि सबै काटी दिएका थिए । श्वेतले देखाएको कार्य कुसलतामा दुबै पक्षका योद्धाहरु छक्क परेका थिए । सो बेला दुर्योधनले कुनै समय गुमाएन । शल्यलाई बचाउन फौजहरु पठाएदिए । त्यहाँ धुनधानको युद्ध भयो । हजारौँ सिपाहिहरुको नाश भयो । ध्वस्त भएका रथहरु र मरेका हाथी घोडाहरु अनगिन्ति थिए । दुर्योधनका मानिसहरुलाई भगाउन शवेत सफल भए । अघि बढेर भीष्मलाई आक्रमण गरे । श्वेतले भीष्मको झण्डा खसालिदिए । भीष्मले पनि श्वेतको घोडा र सारथिलाई मारिदिए । त्यस पछि तिनीहरुले परसपरमा गदा प्रहार गरी युद्ध गरे । श्वेतले गदा रिङ्ग्याएर भीष्म माथि प्रहार गरे । रथ चूर्ण भयो । तर पितामह गदा रथमा लाग्नु अगाडि नै त्यसो हुन्छ भनेर जानेर रथबाट हाम्फालेका थिए । जमिनबाटै धनुष कान सम्म खिचेर भीष्मले श्वेतलाई सांघातिक बाणले हमला गरे । श्वेतलाई सो बाणले लाग्यो र ढली म-यो । दुशासन सिँग फुकेर खुशि भै नाचे । त्यस पछि भीष्मले पाण्डव सेना माथि ठूलो आक्रमण गरे ।
प्रथम दिनको युद्धमा पाण्ढवहरुको फौजले ठूलो दु:ख पाएको थियो । यता धर्म पुत्रलाई ठूलो चिन्ता लागेको थियो भने उता दुर्योधनको खुशिको सिमाना थिएन । पाण्डवहरु कृष्ण कहाँ आएर दु:खको छलफलमा लागेका थिए । "भरतबंशका नायक" भनि कृष्णले युधिष्ठिरलाई भन्यो –'नडराउनुस, भगवानले तपाईँलाई बीर भ्राताहरु दिनु भएको छ । तपाईँ किन शंका उपशंका गर्नु हुन्छ ? । म छु, सत्यकि, बिराट, द्रुपद हुनु हुन्छ र दृष्टद्युम्न पनि छन् । तपाईँले दु:ख मान्नु पर्ने कारण केहि छैन । पूर्ब निश्चित शिकार भीष्मलाई पर्खि बसेका शिखण्डिलाई तपाईँले बिर्सनु भएको छ । युद्धमा भएका घटनाहरु देखेर वाक्क मानेर बाँचिरहने इच्छा भीष्ममा हराओस् र मर्ने इच्छा जागेर आउने दिनको प्रतिक्षा गर्नुस" कृष्णले युधिष्ठिरलाई यसरी धैर्य गराएका थिए ।
दोश्रो दिनको युद्ध[सम्पादन]
युद्धको पहिलो दिन पाण्डव सेनालाई नराम्रो भएकोले सेनामुख दृष्टद्युम्नले सो दोहरिन नदिन प्रकृयाहरुको तजबिज गरे । दोस्रो दिनमा धेरै राम्रो गरी सेनालाई युद्ध रचनामा मिलाए । आत्म बिश्वास पैदा गर्न सब थोक मिलाएको थियो ।
प्रथम दिनमा सफल भएकोबाट गर्ब गरेका दुर्योधन सेनाको माझमा बसेर आफ्ना सेनाहरुलाई सम्बोधन गरेर भने –"युद्धका बीरहरु ! हाम्रो विजय निश्चित भएको छ । युद्ध गर । ज्यानको परवाह नगर ।"
दोस्रो दिन पनि भीष्मले हाँकेका कौरब सेनाले फेरि पाण्डव सेनालाई भयंकर आक्रमण गरी ठूलो क्षति पु-यायो र पाण्डवहरुको सेना रचना बिगारेका थिए । अर्जुनले सारथि कृष्णलाई हरेर भने –"यदि हामीहरु यसरि नै बस्यौँ भने पितामहले हाम्रो सम्पूर्ण सेनालाई नाश गर्ने छ । यदि हामीले भीष्मलाई मारेनौँ भने मलाई डर लागेको छ कि हामीले हाम्रो सेनालाई बचाउन सक्ने छैनौँ ।"
कृष्णले भन्यो –"धनन्जय, त्यसो भए तयार होउ । पितामहको रथ त्यहिँ छ ।"
भीष्म र अर्जुनको भिडन्त[सम्पादन]
कृष्णले रथ भीष्म भए तिर दौडाए । रथ छिटो छिटो बढाएर भीष्मको रथ भए तिर लगे । पितामहले चुनौतिलाई स्वागत गर्न बाणहरु छोडे । सतर्क भएर पितामहको रक्षा गर्न र कहिल्यै उनलाई बिपदमा पर्न नदिन दुर्योधनले आफ्ना मानिसहरुलाई आदेश दिए । त्यसै अनुरूप तुरुन्तै लडाकुहरु पितामहलाई सहयोग गर्न पुगे । सबै मिलेर अर्जुनलाई आक्रमण गरे । कुनै कुराको परवाह नगरि अर्जुनले सबैको सामना गरे । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अर्जुन सित टक्कर लिएर भिड्न सक्नेहरु तीन जना भीष्म, द्रोण र कर्ण मात्र थिए।
भीष्मको सहायता गर्न आएका सबै लडहाकुहरुलाई बिचैमा रोकि दिए । यस बेला अर्जुनले आफ्नो धनुष यसरि धारण गरेका थिए कि त्यो देखेर सेनाका सबै सेनाध्यक्षहरुले प्रशंसा गरेका थिए । उनको रथ बिजुलि चम्के जस्तै चम्केर शत्रु पक्षका फौजहरुलाई छरपस्ट पारेर यताउता छिटो छिटो उफ्रेको जस्तो देखिएको थियो र सो देख्दा सबैको आँखा नै तिरमिराएको थियो ।
सो भिडन्त हेरी रहेका दुर्योधनको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो । भीष्म प्रति उनको बिश्वास डगमगायो । दुर्योधनले भन्यो – "हे गंगा पुत्र, तपाईँ र द्रोण जिवित भै लडिरहेको बेलामा पनि कृष्ण र अर्जुन मिलेर गरी रहेको यस भयंकर हमलाले हाम्रो सबै सेनालाई नाश गर्ने छ । मेरो सेवामा सबै भन्दा पक्का भएका मेरो मित्र कर्ण यस बेला तपाईँकै कारणले युद्धबाट अलग्ग भएर रहेको छ । तपाईले अर्जुनलाई नाश गर्ने कदम छिटै चाल्नु होला जस्तो मलाई लागेको छैन, मलाई शंका लागेको छ ।"
भीष्म र अर्जुनको भिडन्त हेर्न देवताहरु आए । विश्वका सबै भन्दा महान योद्धाहरु यिनै दुईजना थिए । दुबैको रथहरु सेता घोडाहरु द्वारा तानिएका थिए । दुबै पक्षबाट अनगिन्ति बाणहरु बर्षाएका थिए । आकाशमा बाणहरुसंग बाणहरु जोतिएका थिए । कुनै बेला पितामहका बाणहरुले अर्जुन र माधवको छातिमा लागेको थियो । राता राता पलासको फूलहरु भरिएको हरियो फलामको रूख जस्तै कृष्ण उभिएको बेला बगिरहेको रगतले पहिलेको भन्दा शोभा झन बढेको थियो । प्रिय सारथिलाई बाण लागेको देखे पछि अर्जुनको क्रोध झन् बढ्यो र भीष्मलाई खूब ताकेर अर्जुनले बाण हाने । दुबै लडाकुहरु बराबरीका थिए ।
युद्ध धेरै बेर सम्म चलि रह्यो ।
द्रोण र दृष्टद्युम्नको बिचको युद्ध[सम्पादन]
एकातिर त्यो महान दृष्य थियो भने आर्कोतिर द्रोण र दृष्टद्युम्नका बिच घमासान युद्ध भइरहेको थियो ।
द्रोणको आक्रमण शक्तिशालि थियो । दृष्टद्युम्न नराम्रोसित घाइते भएको थियो । तर उनले त्यतिकै साहस गरी बदला लिए । दाह्रा किटेर दृष्टद्युम्नले द्रोणलाई बाणहरु हाने, गदाहरुले प्रहार गरे । द्रोणले पनि ठूलो दक्षताका साथ आत्म रक्षा गरेका थिए । बाणहरुले उनलाई प्रहार गरेका तीखा तीखा हतियारहरु र ओजनदार गदाहरुलाई उनले आकाशमा नै रोकेर तोडफोड गरी दिएका थिए । धेरै पटक दृष्टद्युम्नको धनुष द्रोणले बाणहरु द्वारा भँचि दिएका थिए । द्रोणको एउटा बाणले पञ्चाल राजकुमार दृष्टद्युम्नको सारथिलाई मारि दिए । त्यसो भए पछि दृष्टद्युम्न गदा लिएर रथबाट हाम्फालेर पैदलै अघि बढ्यो । द्रोणले बाण हानेर त्यस गदालाई फुटाई दियो । अनि दृष्टद्युम्न तरबार झिकेर हात्तीको सिकार गर्ने सिँह झैँ उफ्रेर अघि बढे । तर द्रोणले उनलाई सिथिल पारी उनलाई अघि बढन रोकि दियो । तर त्यहि नै बेला भिमले दृष्टद्युम्नको दुरदशा देखेर द्रोण माथि बाणहरु बर्षाए, दृष्टद्युम्नलाई बचाएर रथमा राखेर लगेका थिए ।
दुर्योधनले सो देखेर भिमसेन सित भिडन कलिङ्गका फौजहरु पठाए । भीमले कलिङ्गका धेरै फौजहरुलाई मारि दिए । उनि काल जस्तै भएर शत्रु तिर गएर तिनीहरुलाई ढालि दिए । त्यो संहार यस्तो भयंकर थियो कि जम्मै फौज डरले काँपेका थिए । त्यो देखे पछि कलिङ्गहरुलाई बचाउन भीष्म आए । सत्यकि, अभिमन्यु र अरुहरु भीमको सहायता गर्न आइपुगे । सत्यकिको एउटा प्रहारले भीष्मको रथको सारथिलाई खसालि दियो, यस पश्चात भीष्मको रथका घोडाहरु यस्तो तर्से कि उनिहरुलाई नियन्त्रण गर्न असंभव भयो । उनका घोडाहरु बेतोडले दौडन थाले । भिष्मले थाम्न नसक्ने गरी रथलाई युद्ध स्थलबाट नदेखिने गरी दौडाएर लगे । भिष्मको रथ युद्ध स्थलबाट यसरी बपत्ता भएको देखेर पाण्डवहरु र अरुहरु जोशले उन्मत्त भए, दंग भए । यस अवसरको फायदा उठाएर पाण्डव पक्षकाहरुले कौरब सेना माथि भिषण आक्रमण गरे ।
दोश्रो दिनको विश्लेषण[सम्पादन]
बिशेष गरी अर्जुनको पराक्रमले गर्दा यस दिन कौरब सेनाको ठूलो क्षति भएको थियो । कौरब सेनाका सेनापतिहरु अति बिचलित भए । तिनीहरुको अघिल्लो दिनको जोशहरु सबै हराएको थियो । दोस्रो दिनको युद्ध कहिले अन्त हुने हो भनि तिनिहरुले कौटुहल पूर्बक कहिले अस्ताउने होला भनि सूर्य तिर हेर्न लागेका थिए । पश्चिम दिशातिर घाम अस्ताउन लागे पछि भीष्मले द्रोणलाई भने –"अहिले हामीले युद्ध बन्द गर्नु राम्रो हुने छ । हाम्रा फौजहरु हतोत्साह भएर थाकेका छन् ।" पाण्डवहरुको पक्षमा धनन्जय र अरुहरु बाजा बजाएर हर्ष गरी आफ्नो शिबिर तिर लागे । पहिलो दिनमा पाण्डवहरुको अवस्था भए जस्तै दोश्रो दिनको युद्धमा कौरबहरुको अवस्था भएको थियो ।
कौरव र पाण्डव-सेना को त्यो युद्ध, देवासुर-संग्राम को समान जान पर्थ्यो। आकाश मा खडे भएर देखने वाला देवता को त्यो युद्ध ठूलो आनन्ददायक प्रतीत हो रहयो थियो। भीष्म ले दस दिनहरु सम्म युद्ध गरेर पाण्डवों को अधिकांश सेना को आफ्नो बाणों देखि मार गिराया।
भीष्म द्रोण वध[सम्पादन]
भीष्म पितामह शरशय्यामा साथमा पांडव कृष्ण नारदमुनि
दसवें दिन अर्जुन ले वीरवर भीष्म मा बाणों को ठूलो भारी वृष्टि गर्यो। यता द्रुपद को प्रेरणा देखि शिखण्डी ले पनि पानी बरसाने वाला मेघ को भाँति भीष्म मा बाणों को झडी लागयो दी। दुवै ओर को हाथीसवार, घुडसवार, रथी र पैदल एक-दोश्रो को बाणों देखि मारे गये। भीष्म को मृत्यु उनको इच्छा को अधीन थियो।जब पांडवहरु लाई यो समझ मा आ गयो को भीष्म को रहते त्यो यस युद्ध को हैन जीत सकते त श्रीकृष्ण को सुझाव मा उनले भीष्म पितामह देखि नै उनको मृत्यु को उपाय पूछा. उनले भन्यो कि जब सम्म मेरो हात मा शस्त्र छ तब सम्म महादेव को अतिरिक्त मलाई कुनै हैन हरीयो सकता. उनले ले नै पांडवहरु लाई सुझाव दिए कि शिखंडी को अगाडी गरेर युद्ध लडे. त्यो जानते थिए कि शिखंडी पूर्व जन्म मा अम्बा थियो यसैले त्यो उसलाई कन्या नै मानथे. १०वे दिन को युद्ध मा अर्जुन ले शिखंडी को अगाडी आफ्नो रथ मा बिठाया. शिखंडी को अगाडी देख गरेर भीष्म ले आफ्नो धनुष त्याग दिए। उनको शस्त्र त्यागने पछि अर्जुन ले उनलाई बाणो कि शय्या मा सुला दिए। उनि उत्तरायण को प्रतीक्षा मा भगवान् विष्णु को ध्यान र स्तवन गरदै समय व्यतीत गर्न लगे। भीष्म को बाण-शय्या मा गिर जाने पछि जब दुर्योधन शोक देखि व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ले सेनापतित्व को भार ग्रहण गर्यो। उधर हर्ष मनाती भए पाण्डवों को सेना मा धृष्टद्युम्न सेनापति भए। उन दुवै मा ठूलो भयंकर युद्ध भयो, जुन यमलोक को आबादी को बढाने वाला थियो।तेरहवे दिन को युद्ध मा, कौरव सेना को प्रधान सेनापति, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा, युधिष्ठिर को बंदी बनाउन को लागि चक्रव्यूह/पद्मव्यूह को रचना गरियो। पाण्डव पक्ष मा केवल कृष्ण र अर्जुन नै चक्रव्यूह भेदन जानते थिए। तर उन दिन उनलाई त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते-करते चक्रव्यूह स्थल ले धेरै टाढा लिए। त्रिगत दुर्योधन को शासनाधीन एक राज्य थियो। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह मा केवल प्रवेश गर्न आता थियो, उस लेनिकलना हैन, जसलाई उनले तब सुना थियो जब त्यो आफ्नो माता को गर्भ मा थियो र उनको पिता अर्जुन उनको माता को यो विधि सम्झिइरहेका थिए र बीच मा नै उनलाई नींद आ गई।
तर जस्तै नै अभिमन्यु ले चक्रव्यूह मा प्रवेश गर्यो, सिन्धु नरेश - जयद्रथ ले प्रवेश मार्ग रोक लिया र अन्य पाण्डवहरुलाई भित्र प्रवेश हैन गर्न दिए। तब शत्रुचक्र मा अभिमन्यु एक्लो पर््यो। एक्लो भए पछि पनि त्यो वीरता देखि लडयो र उनले एक्लै नै कौरव सेना को ठूला-ठूला योद्धाहरु को परास्त गरे जिन्में स्वयं कर्ण, द्रोण र दुर्योधन पनि थिए। कर्ण र दुर्योधन ले गुरु द्रोण को निर्देशानुसार अभिमन्यु को वध गर्ने निर्णय लिया। कर्ण ले बाण चलाउनर अभिमन्यु को धनुष र रथ को एक पहिया तोड दिए जसबाट त्यो भूमि मा गिर पर्यो र अन्य कौरवों ले उसपर आक्रमण गर्यो। यस युद्ध मा अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति मा जब अर्जुन को यो ठेगाना लागइन्छ कि अभिमन्यु को मारे जाने मा जयद्रथ को सबै भन्दा ठूलो हात हो त त्यो प्रतिज्ञा लिइन्छ को अर्को दिन को सूर्यास्त हुन बाट पूर्व त्यो जयद्रथ को वध गरेर देगा अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा।
चौदहवें दिन को युद्ध अविलक्षण रूप ले सूर्यास्त पछि सम्म चलता रहयो र भीमपुत्र घटोत्कच, जुन अर्ध-असुर थियो, कौरव सेनाहरु को ठूलो मात्रा मा संहार गरिरह्यो। सामान्यतया, असुर रात्री को समय धेरै अधिक शक्तिशाली हो जान्छन्। दुर्योधन र कर्ण ले वीरता देखि उनको सामना गरे र उस लेयुद्ध गर्यो। अंततः जब यो लागन लागयो कि त्यसै रात घटोत्कच सारा कौरव सेना को संहार गरेर देगा तो, दुर्योधन ले कर्ण देखि यो निवेदन गरे कि त्यो कुनै पनि प्रकार देखि यस समस्या ले छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश भएर शक्ति अस्त्र घटोत्कच मा चलान पर्यो। यो अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उनको दानपरायण्ता को सम्मान स्वरूप दिए गएको थियो (जब कर्ण ले आफ्नो कवच-कुंडल इंद्र को दान दे दिए थे)। तर कर्ण यस अस्त्र को प्रयोग केवल एक पल्ट गरेर सकता थियो, जसपछि यो अस्त्र इंद्र को नजिकै लौट जाएगा। यस प्रकार, शक्ति अस्त्र को प्रयोग घटोत्कच मा गर्न पछि त्यो यसलाई त्यस पछि अर्जुन मा ना गरेर सका।
विराट र द्रुपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्र मा डूब गये।त्यस समय द्रोण काल को समान जान पर्थे। यति नै मा उनको कानहरु मा यो आवाज आयी कि 'अश्वत्थामा मारा गया'। यति सुन्ने नै आचार्य द्रोण ले अस्त्र शस्त्र त्याग दिये। यस्तो समय मा धृष्टद्युम्न को बाणों देखि आहत भएर उनि पृथ्वी मा गिर पडे।
"https://ne.wikibooks.org/w/index.php?title=महाभारत_खण्ड_१९&oldid=16164" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १७:०५, १६ सेप्टेम्बर २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।